खरकाे छाना हटाउदै स्थानिय सरकार : RajdhaniDaily.com
चिना बि क - February 9, 2021 0
चिना बि क - February 8, 2021 0
चिना बि क - January 28, 2021 0
चिना बि क - January 26, 2021 0
Home प्रदेश प्रदेश ७ खरकाे छाना हटाउदै स्थानिय सरकार
चिना बि क,
रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको आठ्बिसकोट नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा भौगोलिक हिसाबले बिकट मानिएको छ । भौगोलिक बिकटतालाई चिर्दै अहिले वडाले मुहार फेरेको छ ।
साविक स्यालाखदी गाविसको ३, ४ र ५ नम्बर वडा मिलाएर आठबीसकोट नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा बनाइएको छ । वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत र यातायात लगाएतका थुप्रै काम प्राथामिक्तामा राखेर गरिरहेको ३ नम्बर वडाअध्यक्ष केसरमान बिक ले बताए ।
४ सय ८३ घरधुरी रहेको यस वडाले प्राथमिकताका आधारमा कामकाज गरिरहेको छ । यसका साथसाथै भौतिक निर्माण, प्रशासनिक कामकाज पनि वडाको प्राथमिकतामै छन् । भौगोलिक हिसावले असजिलो ठाउँ र क्षेत्र भएपनि यसको विकासका लागि नभइ नहुने काम गर्न भन्दै वडाले यी प्राथमिकता निर्धारण गरेको वडाध्यक्ष विकले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट वडाका विभिन्न विकास निर्माणमा परिचालन भएको वडाध्यक्ष विकले बताए ।
यो वडाले खरको छाना हटाएर जस्ताको छाना बनाउने अभियानको सुरुवात गरेको छ । हरेक बर्ष खरको छाना हाल्न समस्या हुने भन्दै वडाले नागरिकलाई जस्ताको छाना हाल्दिने भएको हो । २३८ घरको लागी संघबाट कोटा आएको थियो जसमध्ये ६० घरलाइ प्रतिघर ५० हजारका दरले बजेट पठाएको छ । ३ नम्बर वडामा २० घर छनोट गरिएको थियो अब संघले बजेट थपे निर्माणाधीन ६३ घर यहिबर्ष निर्माण गर्ने बि क के बताए ।
वडाभर १ सय ९६ वटा मुख्य घर खरको छानावाला छन् । बाँकी ९६ घरको पनि अर्को वर्ष खरको छाना हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको छ । साथै अति विपन्न २ घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत २ घर निर्माण भएका छन् ।
पाँचथरमा एम्बुलेन्स दुर्घटना, एकको मृत्यु, दुई घाइते
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - May 31, 2021 0
फिदिम । पाँचथरमा गए राति एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । झापाको बिर्तामोडबाट ताप्लेजुङ जाँदै...
अन्तर्वार्ता चिना बि क - August 10, 2020 0
प्रदेश ६ चिना बि क - June 11, 2020 0
मुसिकोट । रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँमा यही जेठ १० गते भएको घटनाका फरार दुईसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा वडा नं...
सुरक्षा/अपराध राजधानी समाचारदाता - June 3, 2021 0
बागलुङ । बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन क्षेत्रबाट लागु औषध र बन्दुकसहित दुई पुरुष पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले ढोरपाटन नगरपालिका–४ भाँगीबाट एक थान भरुवा बन्दुक,...
कोरोनाको सामना गर्दै सार्वजनिक प्रशासन
बिचार चिना बि क - June 11, 2020 0
२१औं शताब्दी मानव जातिले नयाँनयाँ खोज तथा अनुसन्धान गरेर विज्ञान तथा प्रविधिको युग स्थापित हुँदै गएको अवस्थामा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई चीनको वुहानबाट फैलिएको अदृश्य नोबल...
Breaking News चिना बि क - September 15, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नयाँ संविधानअनुसार पार्टीको संरचनालाई बदल्न विधान बनाए पनि अन्तरिम संरचना गठनका लागि सुरु गरिएको समायोजनको काम सकिएको छैन । कांग्रेसको २०७५...
Breaking News चिना बि क - August 24, 2020 0
Not-to-be-missed चिना बि क - November 3, 2020 0
Breaking News एजेन्सी - May 23, 2021 0
काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएका बेला अमेरिकामा फेरि अर्को भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी)...
कला चिना बि क - October 19, 2020 0
चिना बि क - March 5, 2020